Madaxweynaha Maraykanka ayaa weeraray qorshaha difaaca Jarmalka - Worldnews.com
Madaxweynaha Maraykanka ayaa weeraray qorshaha difaaca Jarmalka
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa muujiyay walwalka uu ka qabo in Jarmalka uu gaaska nabiiciga ka iibsado Ruushka, taas oo uu ku sheegay in ay tahay halis amni, wuxuuna ka hadlayay shirka NATO.
Isaga oo magaalada Brussels kula kulansanaa xoghayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayuu Trump yiri "Waa
"Waa arrin aad ugu xun NATO, Jarmalka waxaa maamula Ruushka"
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta uu magaalada Brussels kula kulmo hoggaamiyeyaasha kale ee gaashaanbuurta Nato, waxaana la saadaalinayaa in...
Ruushka oo dalalka NATO ku eedeeyay inay dagaal qabow wadaan
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka sergei Lavrov oo ka hadlay shirka amniga ee Munich ayaa beeniyay eedo loo jeediyay oo ah inay nabadda curyaaminayaan. Dalalka reer...
Ruushka ayaa qaadaya ol'ole joogto ah oo uu ku jabsanayo kombiyuutarada isaga oo bartilmaameedsanaya dimuqraadiyadda iyo kaabeyaasha kale ee muhiimka ah ee Yurub, sida uu...
Mareykanka oo "shaki la'aan" taageeraya NATO, ayuu yiri Pence
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, Mike Pence oo ka qeybgalaya kullanka amniga ee Munich ayaa sheegay in Ruushka lala xisaabtamayo. Wuxuu tilmaamay in xukuumadda Moscow...
Muranka u dhaxeeya Ruushka iyo Britain oo cirka isku sii shareeraya
Waxaa cirka isku sii shareeraya muranka u dhaxeeya Ruushka iyo Britain, ka dib markii la sumeeyay nin horey uga tirsanaan jiray. Dowladda Britain ayaa falkani ku eedeeysay...
Waxaa cirka isku sii shareeraya muranka u dhaxeeya Ruushka iyo Britain, ka dib markii la sumeeyay nin horey uga tirsanaan jiray. Dowladda Britain ayaa falkani ku eedeeysay dowladda Ruushka. Ruushka ayaa arrintan si caro leh uga jawaabay waxaa uuna sheegay in Madaxweyne Putin lala xiriiryo sumaaynta nin hore uga tirsananaani jiray sirdoonka Ruushka ay tahay arrin naxdin leh...
Madaxwaynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa si kulul u cambaareeyay dadka dhaliilaya kulankii ugu horreeyay ee labo geesoodka ahaa ee uu la yeeshay madaxwayne Donald Trump. Mr Putin ayaa sheegay in xoogag gaar ah ay doonayaan in ay minja xaabiyaan xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo Ruushka "iyaga oo eegaya danaha gaarka ah ee xisbiyadooda",. Madaxwayne Putin ayaa...
Trump oo Madaxweyne Putin ku casuumay inuu soo booqdo Mareykanka
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inuu madaxweynaha Ruushka Viladmir Putin uu sanadkan booqasho ku imanayo dalka Mareykanka. Hadalka aqalka cad ayaa wuxuu ku soo beeegmayaa xilli uu cambaareyn kulul uu la kulmay Trump kulanki Helsinki ee dalka Finland kula yeeshay Putin hadal uu ka sheegay kaddib. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo Sarah Huckabee, waxay...
Aqalka Cad ayaa soo saaray war ah in dowladda Ruushka ay weli halis ku tahay doorashooyinka mustaqbalka ee Maraykanka, wuxuuna hadalkan soo baxayaa xili hubanti la'aan ay ka jirto hadalo uu horay u yiri madaxweyne Trump oo diiday in Ruushka ay inaba farogalin ku sameeyeen doorashooyinkii Maraykanka ee uu isaga kusoo baxay. Trump ayaa u muuqday nin dafiraya warbixintii ay soo...